‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा ट्रु डर्माको अफर !! « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा ट्रु डर्माको अफर !!
सामान खरीदमा १५ सय सम्मको छुट व्यवस्था
२०७८, २५ माघ मंगलवार १२:३२ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । प्रेम र आत्मियताले भरिएको मायाको दिवस अर्थात् ‘भ्यालेन्टाइन डे’ नजिकिदै छ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी १४ मा प्रेम दिवस अर्थात ‘भ्यालेन्टाइन डे’ मनाउने गरिएको छ ।
भ्यालेन्टाइनलाई प्रेमी प्रेमिकाको दिवसको रुपमा मात्र हेर्न जरुरी छैन । यो मायाको दिवस हो, माया आफ्नो आमा, बुवा दिदी बहिनी या दाजुभाइ, आफ्नो प्रीयजन जो कोहीसँग पनि हुनसक्छ । प्रेमले एक किसिमको बाँच्ने उर्जा प्रदान गर्छ ।
यसैलाई दृष्टिगट गरेर भ्यालेन्टाइन डे को अवसरमा ट्रु डर्मा एस.ए. प्रा.लि. ले आफ्ना प्रीयजनका लागि कस्मेटिकसम्बन्धि विभिन्न खरीदमा ५ सयदेखि १५ सयसम्मको छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
६ हजार ५ सय मूल्य पर्ने सामान पाँच हजारमा उपलब्ध गराएको छ । यसमा अफर यस प्रकार रहेको छ ।
कोभिट ह्वाइनेटिङ क्रिम
भर्जिन कोकोनट तेल
भिटामिन सी सेरम
एक्टिभ वडी वास
एसपिएफ ३० सन व्लक
डेरि मिल्क र गुलाफको गुच्छा
यसैगरी ३ हजार २ सय मूल्यको सामान २ हजार ५ सयमा उपलब्ध गराएको छ ।
२ हजार मूल्यको सामान १ हजार ५ सयमा उपलब्ध गराइएको छ ।
डेरि मिल्क र एउटा गुलाफको फूल
आम उपभोक्ताहरुलाई अफरसँगै फ्रि होम डेलिभरि र गुलावको फूल निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । १ हजार ५ सयको सामान किन्नेलाई एउटा गुलाब फूल, २ हजार ५ सय र ५ हजारको सामान किन्नेलाई गुलावको गुच्छा सहित निःशुल्क होम डेलिभरिको व्यवस्था मिलाइएको ट्रु डर्मा एस. ए. का प्रवन्ध निर्देश सुशान्त मुरारकाले जानकारी गराउनुभयो ।
आफ्नो प्रेमिकालगायत आफन्तहरुमा माया र सद्भाव बढोस् भन्ने उद्देश्यले यो अफर राखिएको हो । यो सामान प्रेम प्रेमिका मात्र नभई सबैले खरीद गर्न सक्छन् । यसमा फेस बुक पेज र ह्वाट्स एपबाट खरीदका लागि अर्डर गर्न सकिने प्रबन्ध निर्देशक मुरारकाले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रत्येक वर्ष भ्यालेन्टाइन डे मा नेपालमा मात्र ५ लाख गुलाफ को बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । भ्यालेन्टाइन डे इस्वी संवत् २६९ बाट इटालीको रोमवाट सुरु भएको हो । तेस्रो शताब्दीको अन्त्यतिर प्रारम्भ भएको यस भ्यालेन्टाइन डे को इतिहास सम्झनुपर्दा एक जना रोमका सम्राट्ले नारीसँगको सम्बन्धका कारण सुरक्षाकर्मीहरू मार्फत गोप्य कुराहरू बाहिर जाने डरले प्रेम र विवाहमा रोक लगाउने आदेश जारी गरे । सम्राट्को आदेशलाई एक जना भ्यालेन्टाइन नामका व्यक्तिले उल्लङघन गरेको थियो । एक जना सर्वसाधारणले आफ्नो आदेशको उल्लङघन गरेको कारण सम्राट्लाई सह्य भएन र भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिए । उनलाई मृत्युदण्ड दिइएको दिन १४ फ्रेबुरअरीमा संसारमा भ्यालेन्टाइन डे मनाउने प्रचलनको आरम्भ भएको मानिन्छ ।